Ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo isikimu
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo isikimu
Imali, ke, kube khona ukwenanana ngendlela predetermined ngesikhathi kwemali.
ovamile uwukuthi ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo isikimu phakathi kwabo.
Lona, ezezimali umthengi kanye lesikweletu ngendlela lisetshenziswa nasekuthandeni izinto, ezifana emihle nemibi kuyinto Will enjalo ebalulekile Kuyini.
/ yisona sakhiwo esibhekele fixed-rate ezikhanyisayo
Kuyini uthishanhloko ibhalansi slide kanye isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo indlela?
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo ndlela kulokho okuvame ukubizwa ngokuthi "Okusele slide ezikhanyisayo indlela".
njengoba umehluko enye indlela ukubuyiswa kwemali, lemali ukubuyiswa kwemali ngenxa kwemali ayishintshi isibe sici.
Ngaphezu kwalokho, kusukela kwemali ohlelweni ophendukayo, futhi iphuzu okumele waphinda waboleka ayidluli umkhawulo.
lowo ngokuvamile kubonakala loans ikhadi, eminyakeni yamuva umthengi ezezimali ukuthi iyona kwemali eziyisisekelo usebenzisa le ndlela futhi abaningi. Uma ngisebenzisa ukulondoloza isikhashana
uzothi ukuthi indlela iso. izibonelo letitsite
isibonelo 200,000 yen waboleka at zenzalo ka-14%, inani lemali ukuba ibuyiswe ngemva kwenyanga eyodwa imi kanje.
(20 Indoda × 14%) × (30 ÷ 365 izinsuku)
kwasemini 4 servings, futhi ucabangela, ungasho yini ukuthi akuyona nenani elikhulu kakhulu imali. ukubuyiswa kwemali
ikhokhwa nyanga zonke fixed ukubuyiswa kwemali isamba ngeke ifane kuye ibhalansi. Uma wathatha inqubo, ezifana kwenyuswa
emaphakathi, ake ukhumbule ukuthi isikhathi ngasinye izimali futhi up.
Izinzuzo e izinzuzo
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo isikimu ku uthishanhloko ibhalansi slide kanye isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo indlela ukuthi kulula ukwenza amalungiselelo nyangazonke ukubuyiswa kwemali imali.
Ngenxa yalesi sizathu, kubuye kube ingozi kancane sekwephuzile futhi yiliphi ithuba engaqondile. Ezinjalo njengoba
ukuhlala ngedwa, ukuphathwa imali yakho siqu, noma ubani kungaba indlela buyiselo esinconyiwe.
Ngaphezu kwalokho, ngo-zokweboleka inkampani, kungenzeka ukuthi mina kufanele izimali encishisiwe.
Lona khathi buyiselo, uma abangaphansi kuka-ekuqaleni kuyinto eyinhloko, into kungenziwa ngayo ukunikezwa in ezifana ngocingo noma ehhovisi. Ezinjalo njengoba
esibhedlela okungazelelwe, ngisho kwenzekani yiliphi ithuba kwenhlupheko, isibe ingozi futhi kulula ukugwema ukuthi ukubuyiswa kwemali asikwazi ukwenziwa.
Ngaphandle kwalokho, lapho eye khona ngezindleko okungazelelwe, kuyinzuzo enkulu yokuba akwazi ukuboleka i olwengeziwe uma kukhona ikamelo ku lemali waboleka. Endabeni ukusetshenziswa e
loans ikhadi, ngaphezu ATM ozinikele futhi, futhi sekuyinto etholakalayo kusukela ATM esitolo lula. Uma thina
le izimali nyangazonke hamba ngokuqinile, ngeke ukuthi lula ukusungula umjikelezo ukuthi ukuboleka kuphela uma kudingeka ngobunjalo babo.
kusimo uthishanhloko ibhalansi slide kanye isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo isikimu < Ububi e / h2>
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo indlela, kukhona icala lapho iningi senkokhelo iba isithakazelo, kungashiwo okukhulunywa ukuthi. Lapho
uqhubeke ukuba abuyisele isilinganiso esiphansi imali okunikezwa njalo ngenyanga, sisekhona kuyinto ngempela lenkokhelo, akashintshi umthwalo wallet yakho.
yalokho, kuyothiwa behlaselwa banenkolelo yokuthi kukhona bangakunaki nyangazonke fixed, wena endleleni ukuze asule iba kude.
Ngakho-ke, uma ungayisebenzisi ekusizeni unombono ukuhlela esikhathini esifushane, hhayi ngokuhamba kwesikhathi, futhi ukubuyiswa kwemali ngeke zisaba ukuqeda phakade.
Lokhu kuyiqiniso nangezingane nganoma iyiphi indlela ukubuyiswa kwemali, kodwa Uma ungayibuyiseli lapho ungakwazi ukubuyela, kuzoholela yalokho ukuthi kamuva nihluphe entanyeni yakhe.
Ngaphezu kwalokho, esimweni ekwenzeni kwemali endleleni, kudingeka ukwandisa inani lemali ngesikhathi sokukhokha imali esinqunywe ngokuvumelana, kuba truism ukuthi ayisekho nhlobo encishisiwe.
kucatshangwa njalo "ukubuyela", Zama sikhumbule ukusetshenziswa kuhlelwe.
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo indlela, by inani lemali noma ukuboleka ibhalansi ubhalisele ebolekiwe, yilokho okushiwo izimali nyangazonke ezahlukene.
ukubuyiswa kwemali isamba uhlelo futhi kulula ukusetha, wukuthi kuba khona ukuthula kwengqondo noma ubani ofuna ukuboleka ngokokuqala ngq? izinzuzo imali.
kwadingeka sekwephuzile ukhohlwe usuku ukubuyiswa kwemali, ukuthi uzobe zingenza ukunciphisa amaphutha.
Nokho ewusizo Ngakolunye uhlangothi, uma ungawenzi nanembuyiselo uhlelo niqinile, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ezokwenza kulandelwa ukuphila ebuyisela isithakazelo kuphela ngisho nangemva phakade. Njengalapho ukuba
imali bangakuthengela, ndawonye ukwenza izinkokhelo, nikhumbule ukuze sinciphise isibalo izikhathi buyiselo ngisho nangendlela encane, wathi ukuba izindlela ezinhle kulula ukuyisebenzisa. Ububi e
imali bangakuthengela, ndawonye ukwenza izinkokhelo, nikhumbule ukuze sinciphise isibalo izikhathi buyiselo ngisho nangendlela encane, wathi ukuba izindlela ezinhle kulula ukuyisebenzisa. I
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo yomugqa oqondile buyiselo indlela, by inani lemali noma ukuboleka ibhalansi ubhalisele ebolekiwe, lihlukile izimali ngenyanga.
imali bangakuthengela, ndawonye ukwenza izinkokhelo, nikhumbule ukuze sinciphise isibalo izikhathi buyiselo ngisho nangendlela encane, wathi ukuba izindlela ezinhle kulula ukuyisebenzisa.